Generation gap | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Generation gap
Posted by မောင် ပေ on Jun 16, 2011 in Creative Writing | 20 comments
အတွေ့ အကြုံ လေး တစ်ခု ကို ရေးပြချင်လို့ title ကို Generation gap လို့ ပေးလိုက် မိပါသည် ။ ခေါင်းစဉ်နှင့် အကြောင်းအရာ နှင့် မတိုက်ဆိုင် ခဲ့ပါက သည်းခံ တော်မူကြပါကုန် ။ ကျွန်တော် မောင်ပေ တွင် ခင်မင်ရပါသော ငွေရေးကြေးရေး မကြွယ်ဝ သူ ၊ ကြွယ်ဝ သူ မိတ်ဆွေအပေါင်းအဖော် သူငယ်ချင်းများ ရှိကြပါသည် ။ အမြဲတစ်လို တွေ့ ဆုံ အာလူးပေး ကြရင်း ပြောဖြစ်ခဲ့သည့် အလာပ သလာပ လေးတစ်ခု ကို ရေးပြချင်ပါသည် ။ တစ်ရက်ကပေါ့နော်…လဘက်ရည်သောက်ကြ ရင်း အိမ်ထောင်ကြပြီးသူ ( ကလေး တစ်ယောက် ရပြီး ၊ နောက်ထပ် ကလေး တစ်ယောက်ယူရန် အသင့်ပြင်နေသူ ၊ ငွေကြေး တတ်နိုင်သူ အမျိုးသား သူငယ်ချင်း၊ အသက် ၃၀ ) ကို ကြိုးစားလှချီလား ဟု ချီးကျူးစကား ဆိုလိုက်မိသည် ။ ကျွန်တော် မောင်ပေ က တော့ လူပျို တစ်ယောက်ပါ ၊ အိမ်ထောင်ပြု ရန်ကြိုးစား အားထုတ်နေသူ ( ဤကား စကားချပ် ) ။ သူ ရှင်းပြသည် မှာ သူ့ အသက်အရွယ်နှင့် ယခုအရွယ်တွင် ကလေး ယူ ထားမှ သင့်လျော်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ အသက် ၂၆ နှစ် တွင် အိမ်ထောင် ကြ ပြီး ၂၈ နှစ် တွင် ကလေး စ ရကြောင်း ။ သူ အသက် ၄၀ အရွယ်တွင် ကလေးက ၁၂ နှစ် ပြည့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ သူ အသက် ၄၈ နှစ် ဆိုလျှင် ကလေး က အသက် ၂၀ ပြည့်အရွယ် ၊ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်သော အရွယ် သို့ ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ အကယ်၍ ကလေး သည် မိဘ ကျေးဇူး ကို သိတတ်၍ မိဘ ကို ပြန်လည် လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးမည် ဆိုပါက အသက် ၄၈ နှစ် အရွယ် တွင် စိတ်အေးလက်အေး နှင့် အေးဆေး နားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သူ ၏ အယူအဆ ကို ပြောပြပါသည် ။ အကယ်၍ ကလေး က မသိတတ်သော ဆို ဆုံးမ မရသော အစားကလေး ဖြစ်ခဲ့မည် ဆိုလျှင် လည်း သူ့ အနေဖြင့် မူစရာ မလိုသေးသည့် အရွယ်ဖြစ်သေးသဖြင့် ထပ်မံ ကြိုးစား၍ ရနိုင်ကြောင်း ပါ ထပ်ပြောပါသည် ။ ( ကျွန်တော် တို့ စကားဝိုင်း သည် လူလတ်ပိုင်း စကားဝိုင်း ဖြစ်သဖြင့် စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ဘာသာရေး အကြောင်းအရာများကို သာ ပြောဖြစ်ပါသည် ။ ကွေးသောလက် မဆန့် မှီ ဆန့် သောလက် မကွေးမှီ ဟူသော ခေါင်းစဉ် ကို မပြောဖြစ်ကြသေးပါ ) ထို အခါ မှ ကျွန်တော် မောင်ပေ လည်း စဉ်းစားမိပါသည် ။ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေပြောသော သူ၏ စီမံကိန်းကို စဉ်းစား မိသော အခါ လုပ်သင့်သည် ဟု ထောက်ခံ မိသည် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်တော် မောင်ပေ သည် လူပျိုကြီး ဘဝ ကို ချွတ်ရန် အသင့်ပြင်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့် ။ သားသမီး နှင့် မိဘ သည် အရွယ် မကွာလေ ကောင်းလေ ဟု စဉ်းစားမိသည် ။ သို့ မှသာ စီးပွားတစ်ဘက် ရှာရင်း ကိုယ့် သားသမီး ကို ကိုယ် ပဲ့ပြင်ဆုံးမ လမ်းကြောင်း နိုင်မည် မဟုတ်ပါလော ။ အကယ်၍ အသက် ၃၅ လောက် မှ အိမ်ထောင်ကြ ပြီး အသက် ၃၇ လောက်မှ ကလေး စ ရ ခဲ့မည် ဆိုလျှင် ၊ အသက် ၅၀ တွင် ကလေး က ၁၃ နှစ် ။ အသက် ၅၇ တွင် ကလေး က အသက် ၂၀ ။ ပင်စင်ယူရမည့် အရွယ် လောကီ ကိစ္စများ မှ အနားယူသင့်သည့် အရွယ်ကြ မှ အသက်၂၀ သားသမီး ကို လိုက်လံ ထိန်းကျောင်း နေရမည် ဆိုလျှင် ။ တွေးကြည့်မိပါသည် ။ အကယ်၍ သားသမီး က လိမ်လိမ်မာမာ နှင့် ကိုယ် ဖြစ်စေချင်သော လမ်းကြောင်း အတိုင်း တည့်တည့်မတ်မတ် နှင့် အသားကျ ခဲ့ လျှင် အသက် ၅၇ မက ၆၀ ကျော်ကျော် ပြဿနာ မရှိနိုင် ။ အကယ်၍ သားသမီး က မလိမ်မာ ခဲ့လျှင် ကိုယ် ဖြစ်စေချင် သလို မဖြစ်ခဲ့ လျှင် အသက်ကြီးမှ ဗျာများနေရမည့် အဖြစ် ။ တွေးရင်း..စဉ်းစား ရင်း အိမ်ထောင် မကြ သေးသူ ကျွန်တော် မောင်ပေ ရင်မော လာပါသည် ။ ကျွန်တော် သည် လည်း ၃၀ နား ကပ်နေပြီ ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော် တို့ ယောက်ျားဆိုသော အမျိုးများသည် အိမ်ထောင်ပြု ပြီးပြီးချင်း ကလေးယူချင်ကြသေးသူများ မဟုတ်ပါလော ။
ဒီတော့လည်း ခလေးပါပြီးသား အပျိုဆိုသူကို ယူလိုက်ပေါ့ကွယ်….
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကြောင်ရေ ။ သို့ သော် ညီလေး က ယူစရာ လူရှိပြီးသား မို့ ကိုကြောင်ပဲ ညီလေး ကိုယ်စား ယူလိုက်ပါတော့ဗျာ နော် ( ဟီဟိ ကြွားတယ်လို့ လဲ မထင်ပါနဲ့ ဦးဗျာ ) ။ ခေါင်းစဉ်တပ် မှားသွားတယ်ဗျာ ။ အမှန်က ” အိမ်ထောင်မကြ သေးသူများ မေ့နေသော ခေါင်းစဉ် ” လို့ တပ်ရမှာ နော် ။
အတော်များများက အိမ်ထောင်ပြုမဲ့ အသက်ရွယ်ကိုပဲ စဉ်းစားတယ် … ကလေးယူလိုက်ရင် ဘယ်လို အတိုင်းတာထိ ဘယ်လိုကြီးပြင်းမလဲ မတွေးမိဘူး … ။ ဒါကြောင့်ကလေးကို ကျောင်းပို့တဲ့ အခါ … ကိုယ့်ကလေးက ကိုယ်လိုက်ပို့တာ မကြိုက်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ … ။ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ် သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အဖေ ကျောင်းလိုက်ပို့တာ … ဆရာမကိုယ်တိုင်က အဖိုးလိုက်ပို့တာလားလို့ လောကွတ်ပြုပြီး နှုတ်ဆက်မိလို့ … နောက်ပိုင်း အိမ်အကူကပဲ လိုက်ပို့တော့တယ်….။
အိမ်ထောင်ပြုတယ် ဆိုတာ မီးစမွေးတာ ။ သားသမီး ဆိုတာ အပူဆုံး မီးတဲ့ ။ ကြားဖူးတာ ။
ဒီကိစ္စက အိမ်ထောင်ပြုမယ့်သူ တော်တော်များများ မစဉ်းစားမိကြပါဘူး . အသက်အရွယ်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ပြူကြတဲ့ သူတွေကလဲ လက်ထပ်ပြီးပြီးခြင်း အနည်းဆုံး (1) နှစ်လောက်တော့ ကလေး မယူချင်သေးကြသေးပါဘူး အခုနောက်ပိုင်းကြတော့ အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ သူတွေက အနည်းဆုံးအသက် (25) နှစ်ကျော်လောက်မှ လက်ထပ်ကြတော့ ကလေးကယူကြတာတွေက အသက်ကြီးမှယူသလို ဖြစ်လာကြတာပေါ့ .. အမှန်ဆို ဘယ်အချိန်မှာ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ဘယ်လောက်နေရင် ကလေးယူမယ်ဆို တာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ် အဲတောမှ ကိုယ့်ကလေးအတွက်ရော ကိုယ့်အတွက်ရော အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် …
မောင်ပေ ပြောသလို ကလေး အသက် ၂၀ မှာ လိမ်မာ ပါပြီ သို့သော် တိုင်းတပါးသို့ ထွက်ခွာ ပညာသင် ၀မ်းကျောင်း ပြုလုပ်ပြီး ပြန်မလာခဲ့သော်.. မိအို ဖအို ပြုစုကင်းမဲ့စွာနဲ့ အဝေးမှ နေကောင်းလား ဆိုတဲ့ ဖုန်းသံ ၁ပတ် တခါ မေးသံ မျှော်ရတဲ့ မိဘတွေ အကြောင်းမပါသေးဘူး။
လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ ကံတရားတွေနဲ့ သားသမီးတွေ ရလာကြတာပါ။
ကလေး ရမှာ ချမ်းသာလာတဲ့သူနဲ့.. အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ကလေးလုံးဝ မရတဲ့ စုံတွဲ နဲ့ ကလေးရမှ စုပ်ပြတ်သွားတဲ့ စုံတွဲနဲ့ အသက်ကြီးမှ ကလေးရလို့ ကလေး အလုပ်နဲ့ မောနေတဲ့ စုံတွဲ.. လိမ်လိမ်မာမာ ကြီးလာပြီး ဘ၀ ရှေ့ရေး အတွက် အဝေး စေလွတ်ခဲ့ရတဲ့ မိသားစုတွေ အများကြီးပါပဲ။
ဘ၀တွေ အားလုံးကို ပုံသေနည်းနဲ့ တွက်ချက်ပြီး ဟောကိန်း ထုတ်တဲ့ ဗေဒင်တောင် မှန်ချင်မှ မှန်တာပါ မောင်ပေ ရှင့်။
ငှက်ဖျား ရောဂါ ကူးစက်နိုင်သော ဒေသ များသို့ ကာလ ကြာရှည် သော်လည်းကောင်း ခေတ္တ ခဏ သော်လည်းကောင်း သွားရောက်မည် ဆိုပါက ငှက်ဖျားရောဂါ ကူးစက်နိုင်ပါသည် ။ ထို့ ကြောင့် အချို့ သူ များသည် ငှက်ဖျား ရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း မဖြစ်လာစေရန် အလို့ ငှါ ငှက်ဖျား ဆေး ကို တင်ကြို သောက်လေ့ ရှိပါသည် ။ တစ်ကယ်တမ်း သွားလာနေသူ များ အနေဖြင့်လည်း ငှက်ဖျား ရောဂါ ကူးစက် ဖြစ်ပွားချင်မှ ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
ဆူး တို့ မဟာမြိုင် တောထဲ သွားကြတာ ပြန်လာတော့ တူတူသွားတဲ့ လူတွေ ဖျားကြပြီး ငှက်ဖျား ဖြစ်ကြတယ်။ တော်သေးတယ် ကိုယ်တိုင် ဘာမှ မဖြစ်လို့.. ပြန်လာ ခါစတုန်းကတော့ ဖျားတယ် ဆို ငှက်ဖျား ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ လန့်ရတယ်။
တခြားတော့ မသိဘူး အဲဒီ မဟာမြိုင် တော ထဲက ငှက်ဖျား ဖြစ်တဲ့ လူတွေက နေ့လည်ခင်း အိပ်လိုက်လို့ နေ့ခင်း ခြင် ကိုက်ခံရလို့ ဖြစ်တာလို့ ကောက်ချက်ချကြတယ်။
တွေးတာအရှိန်တော်တော်လွန်နေတယ်..။ ဟို… ကိုရင်လိုဖြစ်နေပြီ..
ဆွမ်းလာကပ်တဲ့.. ဂျာရစ်နဲ့ .. မိန်းကလေး…မြင်တာနဲ့.. စဉ်းစားထည့်လိုက်တာ..
သူနဲ့ငါနဲ့မင်္ဂလာဆောင်.. ကလေးမွေး.. ကလေးကကြီးလာ.. မိဘပြန်မစောင့်ရှောက်ပဲ… မိန်းမခိုးပြေး…
အိုနေပြီဖြစ်တဲ့.. ငါကဒေါကန်..။ ဒုတ်ကောက်နဲ့ ရိုက်…. ဒုံ..ဂလုံ..ဂွမ်.. ( ဆွမ်းမချက်ဖြင့်.ဆရာတော်မှ.. ကွမ်းအစ်နှင့်လှမ်းပေါက်သံ)
… အင်း… တကယ်ကတေ့ာ… ရည်စားတောင်ရှိကြရဲ့လား..မသိ…။
လက်တွေ့ကျကျ .. အရင်တယောက်.. အမြန်ဆုံး… ကောက်ယူကြည့်ပါလေ…။
ငယ်ငယ်က ဖတ်ဘူးတဲ့ ကာတွန်းထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ပြောသလို
တစ်နေ့တုန်းကမှ စာဖတ်ရင်းကြိုက်လို့ မှတ်ထားတာ
၂၇၄။ ရှာမှီးခြင်းတို့သည် မြတ်သော ရှာမှီးခြင်း၊ မမြတ်သော ရှာမှီးခြင်း အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိကုန်၏။
မမြတ်သော ရှာမှီးခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း။
ဤလောက၌ အချို့သောသူသည် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပွါးခြင်း ဇာတိ သဘောရှိသည် ဖြစ်လျက်၊
ကိုယ်တိုင် ဆွေးမြေ့ခြင်း ဇရာ သဘောရှိသည် ဖြစ်လျက်၊
ကိုယ်တိုင် နာခြင်း ဗျာဓိ သဘော ရှိသည် ဖြစ်လျက်၊
ကိုယ်တိုင် သေခြင်း မရဏ သဘောရှိသည်ဖြစ်လျက်၊
ကိုယ်တိုင် ပူဆွေးခြင်း သောက သဘောရှိသည် ဖြစ်လျက်၊
ကိုယ်တိုင် ညစ်ညူးခြင်း သံကိလေသ သဘောရှိသည် ဖြစ်လျက်
ထို ဖြစ်ပွားခြင်း သဘောတို့ရှိသော သား မယား၊ ကျွန်မိန်းမ ကျွန်ယောကျာ်း၊ ဆိတ်နှင့် သိုး၊ ကြက် ဝက်၊ ဆင် နွား မြင်း မြည်း၊ ရွှေငွေ ဤအထည်ဝတု ဒြပ်တို့ ၌ ထိုသူတို့သည် ထို သဘော ရှိသော အရာကို သာလျှင် တပ်မက် မိန်းမော သက်ဝင်လျက် သာလျှင် ရှာမှီး၏။ မမြတ်သော ရှာမှီးခြင်း ဟူသည် ဤသည်ပင်တည်း။
၂၇၅။ မြတ်သော ရှာမှီးခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း။
ဤလောက၌ အချို့သော သူသည် ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပွါးခြင်း ဇာတိ၊
ကိုယ်တိုင် ဆွေးမြေ့ခြင်း ဇရာ၊
ကိုယ်တိုင် နာခြင်း ဗျာဓိ၊ ကိုယ်တိုင် သေခြင်း မရဏ၊
ကိုယ်တိုင် ပူဆွေးခြင်း သောက၊
ကိုယ်တိုင် ညစ်ညူးခြင်း သံကိလေသ သဘောရှိသည် ဖြစ်၍
ထို သဘောတို့၌ အပြစ်ကို သိပြီးလျှင်
ထိုကြောင်းတို့၌ ဖြစ်ခြင်း မရှိသော အတုမဲ့ ဖြစ်သော
ဘေးကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ကို ရှာမှီး၏။ မြတ်သော ရှာမှီးခြင်း ဟူသည် ဤသည်ပင်တည်း။
မဇ္ဈိမနိကာယ် မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန် – ၃ – ဩပမ္မဝဂ် – ၆ – ပါသရာသိသုတ်
အကျိုးရှိမယ်လို.ထင်မိတယ် :-) :-) :-) (ရှောင်သင့်တာလေးတွေကိုကြိုရှောင်လို.ရတာပေါ့) :D :D
သိချင်ရင် အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေကို အင်ဒါဗျုးကြည့် ဘာလို့ မယူပဲ ဒီလောက် နောက်ကျတာလဲလို့..
သိပ်ငယ်လွန်းတော့လည်း လူမှု ဒုက္ခ နိင်ရည် နည်းတယ်လေ.. မြန်မြန်ကွဲ သွားနိုင်တယ်။
တက္ကသိုလ် တက်တုန်းက အတန်းထဲမှာ လင်မယား ၂ယောက် ကလေးပါ ခေါ်လာတယ်။
အသက် ငယ်ငယ်လေးတွေ ဆိုပေမဲ့ ကလေး အဖေ အမေ တောင် ဖြစ်နေပြီ။ သူတို့အတွက် ကလေးက ဆော့စရာ တခု ရသလို ဖြစ်နေတော့ မြင်ရတဲ့ လူတွေက သြချရတယ်။
သင့်တင်တဲ့ ငွေကြေး အင်အား မရှိပဲ ဘ၀ကို မိုက်ရူးရဲ တည်ထောင်လိုက်မိရင်လည်း နောက်ပိုင်း ပြသနာ တော်တော် ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။ ပညာတတ်လာတော့ ပိုတွေးလာကြတာပေါ့။
မြန်မာပြည်မှာ… လောလောဆယ်.. ဒီခေတ်မှာ… အလိုအပ်ဆုံးက..ဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ်သေးဘူး…။ တိုင်းရင်းသားတွေစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့လည်းမဟုတ်သေးဘူး…။ စီးပွားရေးတိုးတက်ပြီး..တိုင်းပြည်ချမ်းသာဖို့လည်းမဟုတ်သေးဘူး…။
ဒီမြေအကျယ်နဲ့.. မြန်မာ့လူဦးရေ သန်း ၁၀၀(အနည်းဆုံး) ရှိနေသင့်တယ်..။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်ယူ…များများယူကြဖို့.. တိုက်တွန်းရမှာပဲ..။
အိမ်ထောင်ပြုကြည့်ပါ..။ လောကကို တူတူရင်ဆိုင်ကြည့်ပါ..။ သားသမီးတွေယူပါ..။
အဲဒါတောင် အဆင်မပြေဘူးထင်ရင်လည်း… နောက်တအိုးတအိမ် ထပ်ထူထောင်ကြပါ..။
အဲဒီအထဲမှ… ငယ်ရွယ်တက်ကြွတဲ့အချိန်.. အရွယ်တွေကို… တယောက်ထဲဖြတ်ရတာ.. နှမြောစရာ..။ တကယ်ပြောတာ…
မာန်နတ် ဆွေမျိုး ဒဂျီးဂဒေါ့
သူများ ဘုရားစကား လမ်းညွှန်တာကို
ကျွန်တော်က တော့ အိမ်ထောင်သည်ဗျ..။ ဒါပေမဲ့ ကလေးယူဖို့တော့ စိတ်မကူးသေးဘူး။
ကလေးယူရင် ကိုယ့်ကိုစော်ကားမယ်ကောင်တွေမွေးလာမှာဆိုးလို့…။ ကိုယ့်တုန်းကလည်းစော်ကားခဲ့တာကို ၀ဋ်တော့လည်မှာအကြောက်သား.. :D
တွက်ကြည့်မှ စက်မရှိ ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ.
ခင်ဗျားလိုဘဲ အရမ်းကို အတွက်အချက်တော်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
စီမံကိန်း ရေရှည်စီမံကိန်းဒွေးတိုးလေးချိုး တို့ ဆိုတဲ့စီမံကိန်းနဲ့သူအသက်25နှစ်တိတိမှာ
ဒီလိုနေရင်းနဲ့ ဘဲ သူအသက်လေးဆယ်ရောက်ချိန်မှာ သူ့ထက်7နှစ်တိတိငယ်တဲ့ချစ်ဇနီးလေးမှာ
အဲတော့ ဆက်စဉ်းစား ကြည့်ပေါ့ဗျာ။
ကဲ အခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ သီချင်းဆိုရုံကလွဲလို့ …………….
လူအားလုံး မှာ မငြင်းနိုင်တဲ့ မမြင်ရသော………………………ဆိုတာကြီးကို
ဟုတ်ပ ကိုပေါက် ပြောတာအမှန်ပဲ ကိုယ်တွေးတဲ့အတိုင်း စီစဉ်တဲ့အတိုင်းသာကွက်တိဖြစ်မယ်ဆိုရင်………..
သူငယ်ချင်းစုံတွဲကတော့ စီးပွားရေး အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားတယ်။ စီးပွား အောင်မြင်လာတော့ ကလေးယူဖို့ စီစဉ်တာပေါ.။ အိမ်ထောင်ကျပြီး ၃နှစ်မှ ကလေးစယူတာနော် အခုထိ အိမ်ထောင်သက် ၈နှစ်မှာ ကလေးမရသေးပါဘူး။ကလေးကလွဲရင် အားလုံးပြည့်စုံနေပါပြီ။ လိုချင်လွန်းလို့ အရုးတပိုင်းပါ။ သားသမီးဆိုတာ မိမိကံနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ လိုချင်ပေမဲ့ မရသူရှိသလို၊ မလိုချင်တာတောင် ရနေသူလည်း ရှိပါတယ်။ သူ့ကံနဲ့သူလာတာပါ။ ချမ်းသာဖို့ကံပါလာသူကလေးက သူ့အထုတ်သူပိုက်လာပါတယ်တဲ့။ ဆင်းရဲဖို့ကံပါလာသူကတော့ မိဘချမ်းသာရင်တောင် သူရောက်မှ စားစရာမရှိအောင်ဖြစ်သူတွေ ရှိပါတယ်။ ကောက်တိုင်းသာ ပါနေရင် ကြက်လည်ဇလုတ်တွေ ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလဲ။